Taliyaha Guutada 1aad ee ciidamad Xoogga dalka General Ibraahim Yuusuf oo Qarax Miino ku dhaawacmay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Taliyaha Guutada 1aad ee ciidamad Xoogga dalka General Ibraahim Yuusuf oo Qarax...
Taliyaha Guutada 1aad ee ciidamad Xoogga dalka General Ibraahim Yuusuf oo Qarax Miino ku dhaawacmay
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in Qarax Miino ah lala eegtay gaari uu saarnaa Taliyaha guutada 1aad ee ciidamad Xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibraahim Yuusuf,waxaana la soo sheegayaa in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray taliyaha.
Gaariga uu saarnaa Taliyaha guutada 1aad ee ciidamad Xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibraahim Yuusuf ayaa miinada kula kacday meel u dhexeysa deegaanka Qalimow iyo Gololey ee gobolka Sh/dhexe.
Sidad wararka aan ku helnay taliyaha guutada koowaad General Ibraahim Yuusuf ayaa horkacayay ciidamo gurmad u fidinayay askar ay Al-Shabaab wadada u galeen.
Dhaawaca soo gaaray Taliyaha guutada koowaad ayaa la sheegay inuu yahay mid fudud hase yeeshee qaar kamid ah ciidamadii la socday ayaa ku geeriyootay qaraxa miino ee haleelay gaarigiisa.
Wararka u dambeeya ee laga helayo weerarka dhabagalka ah ee dagaalamayaal ka mid ah Al-Shabaab ku qaadeen labo gaari oo mini bus iyo gaari Surf ah ayaa sheegaya in ay ku dhinteen illaa toban askari halka tiro kalana ay ku dhaawacmeen.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Sh/dhexe iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la xiriira weerarka dhabagalka ah iyo dhaawaca taliyaha guutada koowaad ee ciidamada xoogga dalka.